Nikarakara azy ireo izy - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Journal succession > 2017-04 mpandimby ny Magazine > Nikarakara azy izy
Ny ankamaroantsika dia namaky Baiboly, nandritra ny taona maro. Tsara ny mamaky ireo andinin-teny mahazatra ary aforeto ao anaty azy ireo toy ny bodofotsy mafana izy ireo. Mety hitranga ny fianarantsika mahazatra satria mahatonga antsika tsy hijery zavatra. Raha mamaky azy ireo amin'ny masony malalaka isika ary avy amin'ny fomba fijery vaovao dia afaka manampy antsika hahafantatra bebe kokoa ny Fanahy Masina ary mety hahatadidy zavatra izay hadinontsika.
Rehefa namaky ny bokin'ny Asan'ny Apostoly indray aho, ao amin'ny toko faha-13, andininy faha-18, dia nahita andinin-tsoratra masina novakiako maro nefa tsy noraharahiantsika loatra: "Ary efa-polo taona no niaretany tany an'efitra" (Luther 1984 ). Tao amin'ny baibolin'i Luther tamin'ny 1912 dia voalaza fa: "nandefitra ny fombany izy" na nadika avy amin'ny King James Version taloha ho amin'ny teny alemana midika hoe "nijaly tamin'ny fitondran-tenany izy".
Noho izany, araka ny tadidiko, dia namaky an’io andalan-teny io foana aho — ary nandre izany — fa Andriamanitra dia tsy maintsy niaritra ny fitarainana sy ny fitomaniana ny Isiraelita toy ny hoe enta-mavesatra ho azy ireo. Fa avy eo dia namaky ny reference aho 5. Mosesy 1,31« Dia hitanareo fa nitondran’i Jehovah Andriamanitrareo anareo tahaka ny fitondran’ny olona ny zanany, tamin’ny lalana nalehanareo mandra-pahatonganareo teto amin’ity tany ity. Ao amin’ny Baiboly vaovao, Lotera 2017, dia milaza hoe: “Ary nitondra azy tany an’efitra efa-polo taona Izy” (Asan’ny Apostoly 1.3,18:). Ny MacDonald Comment dia manazava hoe: "Niahiahy momba ny filan'izy ireo izy".
Nahita jiro aho. Mazava ho azy fa nikarakara azy ireo izy ireo - nanana sakafo, rano ary kiraro tsy antonona izy ireo. Na dia fantatro aza fa tsy hanozona azy ireo Andriamanitra, tsy fantatro hoe tena akaiky sy akaiky azy izy ireo. Nampahery tokoa ny mamaky fa nentin’Andriamanitra ny olony toy ny ray mitaiza ny zanany. Tsy tadidiko fa namaky an'io foana!
Indraindray isika mahatsapa fa tsy zakantsika ny mitondra azy, na miala tsiny ny fikarakarana ny olantsika sy ny olana mitohy ataontsika isika. Toa mitovy ny vavaka ataontsika ary miverimberina foana ny fahotantsika. Na dia mitsikera sy manao tahaka ny Isiraelita ratsy fanahy aza isika, dia mikarakara antsika foana Andriamanitra, na manao ahoana na manao ahoana no misotro azy; amin'ny lafiny iray, azoko antoka fa aleony misaotra azy fa tsy hitaraina.
Ny Kristiana, na amin'ny fanompoana manontolo andro na any ivelany (na dia nantsoina hanompo amin'ny fomba sasany aza ny Kristiana rehetra) dia mety ho reraka sy may. Ny olona iray dia afaka manomboka mahita ny iray tam-po aminy ho toy ny Isiraeliana tsy zaka, izay mety haka fanahy ny olona iray hiatrika ireo olany "mahasosotra" ary hijaly amin'ny alalany. Ny hoe miaritra zavatra dia midika hoe mandefitra amin'ny zavatra tsy tianao na manaiky zavatra ratsy. Fa Andriamanitra tsy mahita antsika tahak'izany!
Zanaky ny zanak'Andriamanitra rehetra isika ary mila fikarakarana feno fifanajana sy fangoraham-po ary fitiavana. Afaka mitia ny mpiara-belona amintsika isika fa tsy miaritra azy ireo fotsiny. Raha ilaina dia ho afaka hitondra olona iray izay tsy ampy intsony ny heriny eny an-dalana. Aoka ho tsarovantsika fa tsy nikarakara ny olony tany an-efitra fotsiny Andriamanitra fa nitondra azy tamin'ny sandriny feno fitiavana. Izy no miantefa hatrany ary tsy mitsahatra ny mitia sy mikarakara antsika na dia mitaraina sy manadino ny mankasitraka aza isika.